musha AFRAN FOOTBALL STORI Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeChriscore striker iyo inozivikanwa zvikuru nezita reNickname; "Rosemary". Our Emmanuel Adebayor Childhood Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yeupenyu hwake musati mazita, hukama hwehukama, nyaya dzemhuri uye zvimwe OFF uye ON-Pitch zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvehutano hwake hwepamusoro asi vashomanana vanofunga nezveEmanuel Adebayor's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Emmanuel Adebayor akaberekwa musi we 26th waFebruary 1984 muLome, Togo. Akazvarwa kuna baba vake, Shadrach Adebayo Adeyi naamai, Hajia Adebayor.
Adebayor akanga asingakwanisi kufamba kwemakore mana ekutanga muupenyu hwake. Amai vake vairwisana nokutora varombo Adebayor kumadokero kweAfrica vachitsvaka mushonga wegumbo rake dambudziko rakawanikwa.
Adebayor akabva ataura nezve 'chishamiso' chake achiti, "... Ndakanga ndiri muchechi yakaradzika uye, panenge mapfumbamwe kana gumi o'clock musi weSvondo mangwanani, ndainzwa vana vachitamba kunze. Pakarepo mumwe munhu akasarudza bhora muchechi. Uye munhu wokutanga kumira uye kumhanya waiva me becashandisa ini ndaida kuwana bhora iyo. Izvi ndizvo pandakaona chishamiso changu. Rimwe zuva ndakacherechedza kuti Mwari akandigadzirira kuti ndive mutambi wechirwi "
Adebayor akavhiringidza munyika yeAc Agaza yeTogo munzvimbo yaro, uko akasimuka. Akaonekwa naMetz Scout, Francis De Taddeo panguva yekurwisana kwevechidiki uye akazoendeswa kuFrance. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Togolese footballer uye Tottenham Hotspur mberi Emmanuel Adebayor kazhinji anochengetedza hupenyu hwake hwega woga, uye zvakawanda hazvizivikanwe nezvemudzimai wake anonzi Charity Adebayor. Anongotarisa zviitiko zvepamusoro zvikuru muEurope naye.
Emmanuel Adebayor uye Wife, Charity
Adebayor uye Charity vane mwanasikana wavakatumidza kuti Kendra Adebayor. Akaberekwa June 2010.
Baba Nomwanasikana- Emmanuel naKendra
Emmanuel Adebayor nemwanasikana wake, Kendra vanotarisisa mumifananidzo iri pasi apa.
Adebayor nemwanasikana vane chinyorwa
Kendra muna 2013 akapemberera zuva rekuberekwa kwake kwechitatu mukuraira kukuru. Baba vake Millionaire baba vaifanira kuisa sangano rakanakisisa kwaari.
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -mhuri
Baba vaAdebayor vanobva kumusha muduku unonzi Igbaye mu 'Odo Otin Local Government
Nharaunda yeOsun State, Nigeria. Baba vake Shadrack Adebayor Adeyi vakafa muna 2005, vachisiya mai vake, Hajia Adebayor. Amai vake vanobva kuguta rakapoteredza rinonzi Ekusa.
Emmanuel ane hama nhatu nehanzvadzi nhatu. Ari pedo kune mumwe wehanzvadzi dzake, Iyabo. Zita remunin'ina wake ndiRotimi Adebayor. Vakasara vaviri hanzvadzi ndiLucia Adebayor (hanzvadzi), Maggie Adebayor (hanzvadzi). Peter Adebayor ndiye munun'una wake.
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Matambudziko eMhuri
Mutariri Adebayor achangobva kunyora tsamba yakareba uye yakajeka pane peji yake Facebook pekutsanangurira marwadzo ehumwe uye mhirizhonga yemhuri yaakaona munguva yake yapfuura, achiratidza kuti mhuri yake yakaedza sei kumubatsira.
Iyo yakareba hurukuro yevanhu vake Facebook peji yakatsanangura mhuri yake matambudziko.
Akanyora pane peji yake Facebook: "SEA, Ndakachengeta nyaya idzi kwenguva yakareba asi ini ndinofunga nhasi zvakakosha kugovera vamwe vavo newe. Ichokwadi kuti nyaya dzemhuri dzinofanira kugadziriswa mukati uye kwete muhurumende asi ndiri kuita izvi kuitira kuti mhuri dzose dzigone kudzidza kubva pane zvakaitika kwandiri. wo, ramba uchifunga kuti hapana chimwe cheizvi chiri pamusoro pemari.
Pakuzera kwe17, nemutengo wangu wokutanga semutambi wenhabvu, ndakavakira mhuri yangu imba uye ndakava nechokwadi kuti vakachengeteka. Sezvo mose muchiziva, ndakagamuchira trophy yeAfrica Player yegore muna 2008.
Ndakauyawo amai vangu pamusana neni kuti ndimuonge nokuda kwezvose. Mugore iroro chete, ndakamuunza kuLondon kune zvekurapa zvakasiyana-siyana check-ups.
GorosiNasikana wangu akaberekwa, takaonana nemamu wangu kuti timuzivise asi iye akabva atsira foni uye haana kuda kuti azive kunzwa nezvazvo. Kuverenga zvataurwa zvako munguva pfupi yapfuura, vamwe vanhu vakati mhuri yangu uye ini ndinofanira kubvunza TB Joshua. Mune 2013, ndakapa amai vangu mari kuitira kuti vamuudze kuNigeria. Aifanirwa kugara kwe1 vhiki; asi mazuva e2 mukati make, ndakagamuchira foni achiti akasiya. Kunze kwezvose zvandakapa amai vangu mari yakawanda kuti vatange bhizinesi rekiki nezvimwe zvinhu. Nenzira, ndakavabvumira kuisa zita rangu nemifananidzo pamusoro pavo kuti vagone kutengesa zvimwe. Ndezvipi zvimwe zvingaitwa nemwanakomana musimba rake kutsigira mhuri yake?
Makore mashoma apfuura, ndakatenga imba muEast Lagon (Ghana) kwe $ 1.2 mamiriyoni. Ndakaona zvakajairika kutendera hanzvadzi yangu yakakura, Yabo Adebayor kugara mumba iyoyo. Iniwo ndakabvumira ini hafu-hama (Dhanieri) kugara muimba imwe chete. Mwedzi mishomanana gare gare, ndaive muzororo uye ndakasarudza kuenda kuimba iyoyo. To ndakashamisika, ndakaona motokari dzakawanda mumugwagwa. Kutaura zvazviri, hanzvadzi yangu yakasarudza kubvarura imba kunze kwangu ndisingazivi. Akasimudza Dhanieri kubva mumba iyoyo. Cherechedza kuti imba yacho yaiva nekamuri dze 15. Pandakamushevedza ndikakumbira tsanangudzo, vakatora maminitsi 30 kuti vashandise uye vandishora pamusoro pechare. Ndakadana mai vangu kuti vatsanangure tiye mamiriro ezvinhu uye akaita zvakafanana nehanzvadzi yangu. Uyu hanzvadzi inoti ini handina kutenda. Mubvunze pamusoro pemotokari ari kutyaira kana chero chipi chaanotengesa nhasi?
Mukoma wangu Kola Adebayor, iye zvino ave ari muGermany kwemakore 25. Akadzokera kumusha maawa anokwana 4, pamari yangu. Ndinonyatsovhara mari yevana vedzidzo yevana. Pandakanga ndiri muMonaco, akauya kwandiri ndokukumbira mari kuti atange bhizinesi. Mwari chete ndiye anoziva kuti ndakamupa zvakawanda sei. Iko kupi ibhizimisi nhasi?
Apo hama yedu Peter yakafa, ndakatumira Kola mari yakawanda kuitira kuti aigona kudzokera kumba. Haana kumbozviratidza pamakuva. Uye nhasi hama imwecheteyo (Kola) iri kuudza vanhu kuti ini ndiri kubatanidzwa murufu rwaPetro. Sei? Iye ndiye hama imwechete iyo yakaenda ndokuudza nyaya dzisina kururama pamusoro pemhuri yedu kune "Sun" kune imwe kutora mari. Vakatumirawo tsamba kuChikwata changu apo ndaive muMadrid kuitira kuti ndidzidziswe.
Pandakanga ndiri muMonaco ndakafunga kuti zvingava zvakanaka kuva nemhuri yevaduku. Saka ndakaita chokwadi kuti hama yangu Rotimi inopinda muchechi yebhola muFrance. Mumwedzi mishomanana; kunze kwevatambi ve27, akaba 21 phones.
Handingatauri chinhu pamusoro pehanzvadzi yangu Peter Adebayor nokuti haasi pano nhasi. Dai mweya wake ugare murugare.
Hanzvadzi yangu Lucia Adebayor anoramba achiudza vanhue kuti baba vangu vandiudza kuti ndimuunze kuEurope. Asi chii chinenge chiri chinangwa chokumuunza kwaari Europe? Everyone iri pano nokuda kwechikonzero.
Ndakanga ndiri muGhana pandakawana nyaya pamusoro pehanzvadzi yangu Petro ari kurwara zvikuru. Ndakatungamira nekukurumidza kwandaikwanisa kuTogo kuitira kuti ndimuchingamidze uye ndibatsire. Pandakasvika, amai vangu vakati handigoni kumuona uye ini ndaifanira kungopa mari uye iye aizogadzirisa zvose. Mwari chete ndiye anoziva kuti ndakamupa zvakadini zuva iroro. Vanhu vari kutaura kuti handina kuita chinhu kuti ndiponese hama yangu, Peter. Ndiri benzi kuendesa maawa 2 kuenda kuTogo pasina here?
Ndakaronga musangano mu 2005 kuti ndigadzirise nyaya dzedu dzemhuri. Pandakavabvunza nezvemaonero avo, vakati ini ndinofanira kuvaka nhengo yemhuri imwe neimwe imba uye kupa mumwe nomumwe wavo mubairo wemwedzi.
Nhasi ini ndichiri mupenyu uye vagova vagovana zvinhu zvangu zvose, kungofanana kana ndikafa.
Nokuda kwezvikonzero izvi zvose, zvakatora nguva yakareba kuti ndigadzirire nheyo yangu muAfrica. Nguva dzose ini ndichiedza kubatsira vanhu vari kushaiwa, vaifanira kundibvunza ini uye vose vaifunga kuti yaiva pfungwa yakaipa.
Kana ndiri kunyora izvi, chinangwa chikuru hachisi chokufumura nhengo dzemhuri yangu. Ndinongoda mamwe mhuri dzeAfrica kuti dzidzidze kubva pane izvi. Ndatenda."
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -unhu
Emmanuel Adebayor ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Strengths: Adebayor ane tsitsi, unyanzvi, intuitive uye akachenjera.
Kushaya simba: Adebayor anonyanya kuvimba.
Zvaidiwa naAdebayor: Kurara, mimhanzi, rudo, mafirimu anoona, kushambira uye zvinyorwa zvekunamata
Zvaidiwa naAdebayor: Ziva-iyo-vanhu vose, vachizvidzwa, nguva yakapfuura yekudzoka kumutsamwisa uye utsinye hwemarudzi ose.
Chaizvoizvo, Adebayor haazvibatsiri uye anogara achida kubatsira vamwe, pasina tarisiro yekudzorera chimwe chinhu.
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -The Juju Story
Nhau huru dzinobva kuBrithani nhau imwechete inoratidza Adebayo achirova amai vake, Alice, uye vachimupomera nezvimwe rudzi rweuchenjeri rwakakonzera hutsotsi hwake.
Nyika yakashamisika asi yakanga isinganyadziswi uyu murume akamboita Arsenal, Manchester City, Real Madrid uye iye zvino Tottenham uye uyo, achienda nezera rake, anofanira kunge ari kuwedzera mukunyora kwake. Asi varume vakagadzikana vakamuita kuti ave nokutenda kuti amai vake vaiva nemhosva. Uye akamupomera pachena. Akanga adzorera zvinangwa zviviri mu12 kunze kweTittenham asati aenda gaga nemhosva yake.
Mukoma wangu ave akangwara -Kola Adebayo mukoma wake akati mu 2015. Kola, 42, mutyairi wemotokari muGermany aifanira kutaurira vhidhiyo muEurope kuti azvidemba kuti Emmanuel akanga akangwara "Musikana alfas uyo akamuudza kuti amai vedu vakanga vari shure kwekusakwanisa kuita zvinangwa." Kola akati zvaityisa kuti Emmanuel akavatenda. Uye panzvimbo yaAdebayo achiedza kudzokera kuhupenyu akazvibvumira kukanganiswa nekutya kwekufungidzira kweupenzi.
Akaenderera mberi ...Adebayo haana kumbobvira achitamba, zvimwe zvipi zvinokonzera zvinangwa. Ari kunyanya kupikisa kurangarira mafungiro emweya kupfuura kunetseka kuti adzoke uye kutora nzvimbo yake. Uye kurwisana nemweya iyo inomubhadhara mari.
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Africa Best Player
Chirongwa chakaipa chainzi Africa muchengeti wechikwata che 2008 pamutambo wemubayiro wakaitwa neChédederation of African Football (CAF). Adebayor akarova vasarudzo vemu Mohamed Aboutrika weEgypt neGhana Michael Essien muvhoti iyo yakaona vatambi vemakwikwi emakambani eCFF's 54 nhengo-nyika dzichivhota.
Adebayor achigamuchira African Top Player Award ye2008
Akange ari pamwe chete naamai vake pamutambo wemubayiro, kwaakagamuchira kristin trophy uye $ 20,000 mubayiro. Akanga ari mutambi weTogolese wokutanga kuonekwa seAfrica mutevedzeri wepamusoro.
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Mhando Yake yemotokari
Aimbova mutambi akapfuma muAfrica. Nezvizhinji zvemari mumaoko ake, anoita zvaanoita zvakanakisisa. Kutenga motokari dzinodhura zvikuru sezvinoratidzwa pasi apa.
Chicoce chaAdebayor chemotokari
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Wakakanganwa Kurega Telefoni yake
Adebayor aigona kusunungurwa zvikuru uye kushamiswa. Akambosvika paIndaneti kubudiswa kweJapan vs Cameroon mutsara webhokisi pasina kukurangarira kupfiga kana kuisa foni yake yakanyarara apo iri mumhepo.
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Team Bus chirwere
MunaJanuary 2010, Adebayor aiva mumwe wevatambi vaibatanidzwa apo bhasi reboka reTogo rakaputirwa nepfuti munzira inoenda ku2010 Africa Cup of Nations muAngola.
Adebayor aifananidzirwa achichema nguva mushure mekunge apukunyuka kurwisa kwegandanga muAngola mumhanyi-kusvika ku2010 Africa Cup of Nations. Kurwisa kwacho kwakasiya mutyairi uye imwe nhengo yeTogo national football team yakafa uye vamwe vatanhatu vakakuvara zvikuru. Nenguva isipi Adebayor akapona.
Muna 2013, Adebayor akadzokera kuTogo team ye2013 African Cup of Nations muSouth Africa, kwaakavabatsira kuti vawane chikamu chekupedzisira. Iye zvino ari Togo's all-time top goalscorer ne 31 zvinangwa.
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Anopa
Adebayor ndiye anopa simba kunyika yake yeAfrica. Pasi pane mufananidzo wekudzorera kuchikwata.
CHOKWADI KUTI: Ndinokutendai nekuverenga Emmanuel Adebayor Childhood Story pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Teko Bhenjamini Mbudzi 18, 2018 Pa 9: 03 am
Nyika ino iri nyore asi ine ngozi nokuti isu vanhu tiri mari. pasinei nokuti iwe unoita zvakanaka kana zvakaipa uchashorwa, chengeta mutakuri wako. Iwe wakakomborerwa
Yakagadziridzwa zuva: Kukadzi 9, 2018
Yakagadziridzwa zuva: Kurume 4, 2018